डायस्पोरामा नेपाली समाजको प्रभुत्व बिस्तारै स्थापित हुँदैछ । हालका दिनहरुमा प्रवासी नेपाली समाज नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने वर्गको रुपमा मात्र सीमित नरही विदेशी भूमिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, दक्षता र सिपका आधारमा नीति नियम निर्माण गर्ने तहमा समेत पुगिसकेका छन् । यति मात्र हैन, सामान्य रोजगारी मात्र गरेरै भए पनि विदेशी भूमिमा घरजग्गा खरिद गरी स्थायीरुपले बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गैराखेको छ । यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो ।
विदेशी भूमिमा नेपालीको प्रभुत्व बिस्तार हुनु भनेको हामी सबैको लागि गर्वयोग्य बिषय हो । त्यस्तै विदेशमा गई बसोबास गर्ने कैयन नेपालीहरुले विदेशी भूमिमा नै भए पनि घरजग्गामा लगानी गर्दै आर्थिक स्थायित्वका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका अनगिन्ती उदाहरणहरु हाम्रासामु विद्यमान छन् । यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै यहाँ हामीले विदेशी भूमिमा आफनै घरको सपना देख्नुहुने तमाम नेपालीहरुलाई घर खरिद गर्दा ध्यान दिनु पर्ने यावत आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी पक्षहरुमा सहयोग पुगोस् भन्ने मनसायले केही महत्वपूर्ण जानकारीहरु प्रस्तुत गर्न गईराखेका छौं ।
डायस्पोरामा संघर्षरत लाखौं नेपालीहरुले आफनो श्रम, सिप र परिश्रमको कमाईबाट विदेशी भूमिमा घरजग्गा खरिद गर्दा आईपर्ने आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कठिनाई के के हुन् ? ती कठिनाईहरुलाई बेलैमा कसरी पहिचान गर्ने ? मुलुक बाहिर घरजग्गा खरिद गर्दा के कस्ता आधारभूत ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ ? भविष्यमा आईपर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरुलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ?
उल्लेखित प्रश्नहरुको वैज्ञानिक जवाफ केलाउने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ । यो जानकारी निम्ति उत्तर अमेरिकी मुलुक क्यानडामा रियलस्टेट व्यावसाय गर्दै आएका Foresthill Signature समूहका युवा घरजग्गा व्यवसायी भानु सिवाकोटीसँग यस व्यावसायका प्राविधिक पक्ष, घरजग्गा खरिदकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु र अपनाउनुपर्ने साबधानीका बारेमा साझापोष्टका लागि माधव दाहालले संक्षिप्त कुरा गरेको थियो । घरजग्गा खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका सम्बन्धमा ब्यवसायी सिवाकोटीले दिएका सुझावहरु यस लेखको अन्त्यमा समावेश गरिएका छन् ।
घरजग्गा खरिद एक महत्वपूर्ण निर्णय
आम सर्वसाधारण मानिसको लागि घरजग्गा खरिद गर्नु भनेको जीवनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण तथा दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय हो । तर यसो भन्दैमा कसैको देखासिकी तथा लहैलहैमा लागेर अनि आफ्नो आवश्यकता र आर्थिक क्षमताको पहिचान नै नगरी गरिने लगानीले भने सधैं राम्रो परिणाम नै दिन्छ भन्ने छैन । भनिन्छ नि आफ्नो घाँटी हेरेर मात्रै हड्डी निल्नु पर्नेमा अरुको ददेखासिखी तथा नक्कल गर्दा हामीहरु जिन्दगी भरी पछुताई रहन्छौ । अझ त्यसमा पनि विदेशी भूमिमा पोखिएको श्रम र पसिनाको मूल्य हाम्रो क्षण भरको निर्णयले चकनाचुर नहोला भन्न सकिँदैन । बिशेषः गरेर विदेशी भूमिमा यदि कसैले घरजग्गा खरिद गर्न चाहन्छ भने उसले त्यसको सम्भावित परिणाम, मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता, उक्त मुलुकमा विद्यमान रहेको घरजग्गा सम्बन्धी कानुनी प्राबधानहरु, निर्माण भएको घरको अवस्था, मर्मत सम्भारको लागि लाग्ने खर्च, अनि त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्वका बारेमा गम्भीर अध्ययन, सोच विचार र छलफल गर्नुपर्दछ । यति सबैकुरामा ध्यान दिन सकियो भने अनि आफ्नो घर परिवार, साथीभाइ, शुभचिन्तक तथा अनुभवी तथा विश्वसनीय व्यावसायीहरुको उचित सल्लाह र सुझावका आधारमा निर्णय गरियो भने हामीहरु भविष्यमा आउने जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्न मात्र हैन । आफ्नो जीवनभरको लगानीलाई सहि ठाउँमा लगाउन सक्छौं । अनि यसै क्षेत्रबाट मनग्य लाभ पनि लिन सक्छौं । तर, हामीहरु यी सबै कुराहरुमा ध्यान दिन भ्याउँदैनौ वा जान्दैनौं । आफना साथी भाइहरुको घर भै सक्यो । आफ्नो चाँही भएन भन्ने ऐठन हामीमा हुन्छ । हामी आफनो स्रोत र साधनले भ्याउनेसम्मको सम्पत्ति खारिद गर्नुको अलावा भावनामा बगेर निर्णय गर्छौ । पहिला हतारमा निर्णय गर्छौ अनि पछि पछुताउँछौं ।
एकभन्दा बढी रियल्टरसँग बुझ्नु राम्रो
घरजग्गा खरिद गर्दा हामीहरुलाई धेरै भन्दा धरै सूचना आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले कुनै एक जाना व्यवासायीसँग मात्र कुरा बुझ्नुभन्दा धेरैभन्दा धेरै रियल्टरसँग कुरा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि एकभन्दा बढी व्यावसायीहरुसँग कुरा बुझ्ने, उनीहरुबाट प्राप्त जानाकारीलाई क्रस भेरिफाई गर्ने, उनीहरुमध्ये कसले उपयुक्त प्रोपर्टी देखाएको छन्, त्यसको बारेमा बिस्तृत जानाकारी प्राप्त गर्ने गर्नुपर्दछ । हामीहरुमध्ये धेरैजसो व्यक्तिहरु कुनै एक रियल्टरको मात्र भर पर्ने गर्दछौं । उसैको गाडीमा जान्छौ । उसले दुईचार घर देखाए पछि उसले नराम्रो पो मान्छ कि भन्ठानेर करिब करिब हतारमा अनि कतिपय अबस्थामा लहैलहैमा लागेर घर खरिद गर्छौं । लहैलहैमा घर खरिद गर्न हिंडेका हामी अनायासै कतै फस्छौं । अनि पछि पछुताउँछौं । यो सर्वथा आत्मघाती हुने गर्दछ । सम्भावित ग्राहकलाई घर देखाउनु रियल्टरको पेशा हो । यो उसको धर्म हो यसमा कुनै शंकोच मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कसैसँग दुईचार पटक घर हेर्न हिंड्दैमा उसैले भनेको घर किन्नुपर्छ भन्ने सोच्नु आफैमा गलत कुरा हो । जबसम्म हामीहरु धेरैभन्दा धेरै घरहरु हेर्ने अनि बढीभन्दा बढी जानकारी प्राप्त गर्ने गर्दैनौं तबसम्म हामीहरुले गरेको निर्णय सहि नहुन सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा हामीहरु जीवनभरको लागि फस्छौं । कुनै एक रियल्टर बिशेषलाई गाली गरेर आफ्नो उक्त समस्या सुल्टिदैन । उसले पनि सबै सूचना पाएको नहुन सक्छ । त्यसको लागि हामी आफैं सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । तर परिस्थितिवश हामी सोही अवस्थामा पुग्छौं जहाँ पुगेपछि फर्कन हामीलाई धेरै पापड बेल्नु पर्नेहुन्छ । कुनै एक व्यावसायीसँग मात्र भरपर्दा कैयन नेपालीहरु विदेशी भूमिमा नराम्ररी फसेका उदाहरणहरु पनि भेटिएका छन् । घरजग्गा खरिदपश्चात् रियल्टरसँग मुद्दा मामिला गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुपरेको उदाहरणहरु पनि हाम्रै सामू विद्यमान छन् । यो सर्बथा दुःखद कुरा हो । यसैले घरजग्गा खरिद गर्दा एक वा एक भन्दा बढी रियल्टरहरुसँग परामर्श गर्ने, बढीभन्दा बढी सूचना प्राप्त गर्ने तथा व्यावसायिक लाभ मात्र नहेरी समुदायप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पनि बोध गर्ने विश्वसनीय व्यावसायीसँग कारोबार गर्नुपर्दछ ।
नेपाली रियलस्टेट व्यावसायीहरुसँग नेपाली ग्राहकहरुको अपेक्षा
डायस्पोराका कैयन मुलुकहरुमा नेपालीहरु रियलस्टेट व्यावसायी स्थापित भएका छन् । यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो । त्यसैले विदेशी भूमिमा जति नेपालीहरुले घरजग्गा खरिद गर्दछन् । उनीहरुको पहिलो छनौटमा नेपाली व्यावसायीहरु पर्नु स्वाभाविक नै हो । तर उनीहरुको व्यवहार र पेशागत धर्म कमिसनमा मात्र केन्द्रित रहने हो र घर खरिद गरिसकेपछिका दिनहरुमा खरिदकर्ताहरु ‘भाँडमा जाए’ जस्तो स्वभाव उनीहरुबाट प्रदर्शित गरिने हो भने प्रवासी नेपाली समाजमा आर्थिक अराजकता मौलाउने छ तथा नैतिकताको चरम खडेरी पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा नेपाली समुदायले नेपाली व्यावसायीहरुसँग देखाएको झुकावका सम्बन्धमा गरिएको सवालमा स्थापित रियलस्टेट व्यावसायी सिवाकोटीको धारणा छ, ‘जसरी नेपाली ग्राहकहरुले नेपाली रियल्टरहरुसँग घरजग्गा खरिद गरेर आफनो समुदायप्रति सदाशयता देखाएका हुन्छन्, त्यति नै सदासयता नेपाली ग्राहकहरु माथि रियल्टरहरुबाट पनि प्रदर्शित हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘नेपाली रियल्टरहरुले नेपाली ग्राहकसँग देखाउनु पर्ने सदासयता, सहयोग र सल्लाह माथि कुनै पनि हिसाबमा कम्प्रोमाईज्ड हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन पनि ।’ उनको विचारमा नेपाली रियल्टरहरुले नेपाली ग्राहकलाई गर्ने सहयोग व्यावसायिकताभन्दा धेरै माथि उठेको हुनुपर्दछ । यो व्यावसायीहरुको पेशागत धर्म मात्र नभएर नैतिक तथा सामाजिक दायित्व पनि हो ।
घर डाउन पेमेन्टले मात्र किनिंदैन
जब हामीसँग केही पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई घरजग्गामा लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । आमरुपमा यो स्वभाविक कुरा पनि हो । त्यहि सिलसिलामा हामी आफुले चिनेको वा कसैले सुझाएका कोही रियल्टरहरु समक्ष पुग्छौं र धमाधम घर हेर्न थाल्छौं । यो सर्वथा अव्यावहारिक कुरा हो किनभने हामीसँग भएको थोरै डाउन पेमेन्टले मात्र घर किनिँदैन । हामीसँग भएको डाउन पेमेन्टको पैसाभन्दा बाहेकको सबै रकम बैकबाट ऋणको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यस अवस्थामा अब हामी आफुले आफैलाई सोध्नुपर्छ । के बैंकले ऋण दिने सम्पूर्ण कागजात तथा आम्दानीको प्रमाणहरु आफुसँग छ त ? अथवा के बैकले ऋण प्रवाह गर्ने विधि र प्रकृयाका बारेमा हामी कति हदसम्म सुसुचित हुन सक्यौं, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । यि सबै कुराको बारेमा हामीले घर खरिद गर्नुपूर्व नै जानकारी लिनु उत्तम हुन्छ । कुनै रियल्टरलाई मेरो मोर्गेजको जिम्मा पनि हजुरलाई नै भयो, मलाई केही थाहा छैन, सबै तपाईको भरमा हो, पैसाचाहि डुब्नु भएन है भन्दै आफुलाई निरक्षर जस्तो प्रमाणित गर्नु सर्बथा घातक कुरा हो । भोलि कथम् कदाचित बैंकबाट ऋण स्विकृती नहुँदा आईपर्ने कानुनी समस्याको भागिदार घर खरिदकर्ता हामी आफैं हुने हो । यसमा रियल्टरको केही हात हुँदैन । यसैले आफुले किन्ने घरको लागि बैंकबाट कसरी ऋण आउँछ र त्यसका लागि आफुसँग कति पैसा छ भन्ने कुराको हेक्का पहिल्यै राखेर अगाडि बढ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन जान्छ । उचित रियल्टर छान्न नजान्दा, उचित जानकारी लिन नसक्दा वा नजान्दा हामीले अनगिन्ती समस्याहरु जेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाईले घरजग्गा खरिद गर्न डाउन पेमेन्ट बुझाउनु भयो, कन्ट्रयाक्ट साईन गर्नुभयो तर बैंकले तपाईलाई लोन दिएन भने तपाई फस्नुहुन्छ । तपाईले घरजग्गा खरिद गर्न कबुलनामा गर्दै बुझाउनु भएको लाखौं रुपैयाँ डुब्ने मात्र हैन तपाई भबिष्यमा समेत यस प्रकारको खरिद बिक्रीको लागि अयोग्य ठहरिन सक्नुहुन्छ । यस अवस्थामा तपाई डिफल्टमा जान सक्नुहुन्छ । त्यसैले डाउनपेमेन्ट बाहेकको रकम जोहो गर्ने स्रोतको ग्यारेन्टी बेगर खरिद बिक्रीमा हात हाल्नु भनेको भुङ्ग्रोमा हात हालेर झिक्नु सरह नै हुने गर्दछ ।
प्रवासमा घरजग्गा खरिद गर्न चाहने नेपालीहरुले ध्यान दिनुपर्ने सवालहरुका सन्दर्भमा Foresthill Signature समूहका क्यानाडियन रियलस्टेट व्यावसायी भानु सिवाकोटीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएका केही सुझावहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन्-
घरका लागि क्राईटेरिया निर्धारण तथा परामर्श
सर्वप्रथम तपाईहरु घर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने घरको लागि आफ्ना क्राईटेरियाहरु के के हुन् सोको बारेमा पहिल्यै सुसुचित हुनुहोस् र एक वा एकभन्दा बढी रियल्टरहरुसँग बजारको बारेमा बिस्तृत जानकारी लिनुहोस् । आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्नुहोस् । अरुको देखासिखी नगर्नुहोस् ।
घर खरिद गरेपछि मासिक तिर्नुपर्ने मोर्गेजका अतिरिक्त आउने खर्च जस्तै प्रोपर्टी ट्याक्स, म्यानेजमेन्ट शुल्क, मर्मतसम्भार खर्चका बारेमा पूर्ण जानकारी राख्नुहोस् ।
घरको लागि अफर हाल्नु अघि, अफर हाल्ने क्रममा अनि अफर स्वीकृत भैसकेपछि के के कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जानाकार व्यक्तिहरुसँग सो कुरा बुझेर मात्र अफर हाल्ने कार्य गर्नुहोस् ।
कारणबस कुनै दाबी वा झै झगडा र अदालती कारबाहीमा रहेको घर खरिद नगर्नुहोस् । यसमा तपाई अनावश्यक झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
आवश्यक कानुनी शब्दाबलीको अर्थ जान्नुहोस् । घर किनबेचको कन्ट्रयाक्टमा प्रयोग हुने कानुनी शब्द र त्यसको अर्थका बारेमा जानकारी राख्नुहोस् ।
पहिलोचोटि घर खरिद गर्दा ल्याण्ड ट्रान्स्फर ट्याक्समा पाईने छुट, घर निर्माणकर्ता बिल्डरबाट पाउने छुटका बारेमा बिस्तृत रुपमा थाहा पाउनुहोस् ।
डाउन पेमेन्ट तथा मोर्गेजको जगेर्ना
घर खरिदका लागि न्युनतम डाउन पेमेन्ट रकम जम्मा पार्नुहोस् र उक्त रकम कम्तीमा ३ महिनासम्म नचलाईकन राख्ने गर्नुहोस् । आफुसँग भएको डाउन पेमेन्ट गर्ने पैसा बैंकबाट झिक्दै राख्दै गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । तपाईको बैंक खातामा निश्चित समयसम्म पैसा डिपोजिट भएको नदेखिएमा घर खरिदको समयमा बैंकले त्यस्तो पैसाको स्रोत खोज्न सक्छ र हामीले त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नै पैसाको स्रोत समेत खुलाउन अप्ठ्यारो पर्नेगरी रकमलाई अनाjश्यक रुपले झिक्ने, राख्ने नगर्नुहोस् ।
बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा व्यक्तिसँग भएको डाउन पेमेन्ट रकम, उसको परिवारको वार्षिक आम्दानी, उसँग भएको ऋणको अवस्थालाई आधार मान्ने गर्दछ । यदि बैंकबाट घर खरिदका लागि पर्याप्त ऋण प्रवाह हुन नसक्ने अबस्थामा आफैले फेरि डाउन पेमेन्टको रकम बढाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको लागि पनि आफु तयार रहनुहोस् । वा यस्तो अवस्थामा आफुलाई विश्वास लागेको मोर्गेज एजेन्टसँग सल्लाह गर्नुहोस् ।
आफुले लिने ऋणको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी राख्नुहोस् । उक्त ऋणको वार्षिक ब्याजदर कति छ, सो ब्याजदर फिक्स हो वा भेरिएवल हो त्यसको बारेमा पनि बिस्तृत जानकारी लिनुहोस् । अनि फिक्स र भेरिएवल ब्याजदरका फाईदा र बेफाईदाहरु के के हुन् सो को पनि सकेसम्म पूर्ण जानकारी राख्नुहोस् ।
घर चाँडै नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ भने सकेसम्म फिक्स ब्याजदरको ऋण नलिनुहोस् । भोलि कन्ट्रयाक्ट अवधिभन्दा अगावै घर बेच्नु पर्‍यो भने बैंकले हर्जाना लगाउँछ । त्यसको बारेमा सही जानकारी राख्नुहोस् ।
सकेसम्म २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईलाई मोर्गेज इन्स्योरेन्स गर्नुपर्दैन। जति बढी डाउन पेमेन्ट भयो इन्स्योरेन्स रेट पनि त्यसरी नै कम हुन जान्छ । यो कुरामा विचार पुर्‍याउनुहोस् ।
जगेडा स्रोतको व्यवस्थापन
तपाईले आफ्नो पैसालाई GIC, RRSP, Tax Free Saving Account, Mutual Fund जस्ता स्रोतबाट कम्तीमा ९० दिन अगाडिदेखि नै सुरक्षण गरी राख्नुपर्दछ । यदि डाउन पेमेन्टको पैसा वा Closing cost को पैसा कसैसँग सापटी गरेर चलाउने योजना बनाउनु भएको छ भने कारोबारको शुरुवाती क्रममै आफ्नो रियल्टरबाट उचित सल्लाह लिनुहोस् । कसैसँग मागिने रकमका सम्बन्धमा बैंकले गिफ्ट लेटर माग्न सक्छ । यसको लागि पनि आफु तयार रहनुहोस् । त्यस्तै ठूलो परिमाणमा कसैसँग ऋण लिँदा बैंकले नपत्याउन सक्छ । यसका लागि पहिले नै सजग रहनुहोस् ।
यदि घर किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने कार लोन, लाईन अफ क्रेडिट जस्ता ऋणमा एप्लाई नगर्नुस् । ती कामहरु घर किनी सकेपछि गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि तपाईले घर खरिद गर्नुपूर्व कुनै बैंकबाट तपाईको लाईन अफ क्रेडिट डिक्लाईन भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बैंकले तपाईलाई घर खरिद गर्न ऋण पत्याउँदैन । त्यसैले त्यस्ता ऋणको लागि यदि डिक्लाईन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ भने एप्लाई नै नगर्नुहोस् ।
यदि बैंकले भने जति ऋण प्रवाह गर्न चाहेको छैन भने घरको लागि अफर हाल्दा कम्तीमा पनि ५ दिनको फाईनान्सिङ कन्डिसन राख्नुहोस् । त्यति समयसम्म तपाईले बैंकबाट मोर्गेज कमिटमेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्न भने त्यस्तो डिलमा अगाडि नबढ्नुहोस् । नत्र तपाईका दुःखका दिन सुरु हुन सक्छन् ।
त्यती धेरै ब्याज तिरेर घर किन्दा तपाईलाई नाफा हुन्छ वा हुँदैन सोको बारेमा राम्रो हिसाबकिताब गर्नुहोस् । नाफाको लागि घर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने बढी ब्याजमा घर खरिद गर्दा तपाईलाई झन समस्या पर्न सक्छ ।
क्रेडिट स्कोर तथा मोर्गेज एप्रोभलमा यसको भूमिका
आफ्नो घर किन्नुभन्दा पहिला आफ्नो क्रेडिट स्कोर कति छ सोको बारेमा जानकारी लिनुहोस् । कम क्रेडिट स्कोर भएको अवस्थामा बैंकले ऋण प्रवाह गर्दैन । उक्त अवस्थामा दोश्रो तहका ऋण प्रवाहकर्ता कहाँ जानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अबस्थामा ऋणको ब्याज बढी पर्न जाने हुन्छ । सो अवस्थाबाट बच्नुहोस् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो क्रेडिट स्कोर बैंकलाई पुल गर्न नदिनोस् । तपाई जतिपटक आफ्नो क्रेडिट स्कोर पुल गर्नुहुन्छ त्यतित्यति तपाईको क्रेडिट स्कोर घट्दै जान्छ । यसका बारेमा पहिले नै सचेत हुनुहोस् ।
क्रेडिट रिपोर्ट राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्नुहोस् । आफुले तिर्नुपर्ने बिजुली, पानी, टेलिफोन, अध्ययनको लागि लिईएको ऋण, ओस्याप, गाडीको कर्जा, ईन्स्युरेन्स प्रिमियम आदिको समय मै भुक्तानी गर्नुहोस् । दुई चारपटक मात्र रकम तिर्न ढिला हुँदा पनि तपाईको क्रेडिट स्कोर नराम्ररी घट्न सक्छ । क्रेडिट नराम्रो हुनु भनेको तपाईलाई बैंकले ऋण नपत्याउनु हो । यति कुरामा ध्यान दिनुभयो भने तपाईले आफ्नो क्रेडिट स्कोरलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ।
घरको बनाबट तथा अन्य प्राविधिक पक्ष
घर खरिदको प्रकृया अगाडि बढाउँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घरको इन्सपेक्सनको क्लज आफ्नो कन्ट्रयाक्टमा अनिवार्य रुपमा राख्नुहोस् ।
घरको झ्याल ढोका नयाँ छन् कि छैनन्, घरमा Central AC छ वा छैन, Furnace र AC कति नयाँ छन्, ती Rental हुन् कि Owned हुन्, Washroom/Kitchen मा Vent छ वा छैन विचार पुर्‍याउनुहोस् । यी सबै कुराको बारेमा जानकारी लिनुहोस् ।
घरको बाहिरी स्वरुपबाट पनि तपाई धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । घरको भित्तामा कतै लामो चिरा परेको छ छैन वा घरको भित्र पट्टिको भित्ता सुख्खा छ वा छैन सोको निर्क्यौल गर्नुहोस् । कथम कदाचित् भित्तामा वा भुईमा धब्बाहरु छन् भने उक्त ठाउँमा Moisture/Mold छ भने त्यस घरमा पानी पसेको हुन सक्छ । यति कुराको जानकारी आफैं राख्नुहोस् । अरुको मात्र भर नपर्नु होस् ।
घरको छाना कति पुरानो छ, झ्याल ढोका कति बर्ष पहिले फेरेको हो, घरको प्लम्बिङ, वाईरिङको अवस्था के छ ? सोको जानकारी राख्नुहोस् ।
घर किन्दा Solid Brick को भए राम्रो हुन्छ । घरसँग ग्यारेज हुनु घरको अर्को सवल पक्ष हो । यसको बारेको जानकारी राख्नुहोस् ।
पुरानो घर खरिद गर्दा चटक्क देखाईएको रिनोभेसन सहि हो वा हैन सोको पहिचान गर्नुहोस् । बेच्ने नियतले गरिएको रिनोभेसनमा फसिने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । यसमा ध्यान पुर्‍याउनुहोस् ।
बाटोघाटो तथा Swimming Pool को अवस्था
सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सहि लोकेसनमा ध्यान दिनुहोस् । यदि आफुले किनेको घर सहि स्थानमा छ भने सम्भवत जस्तो सुकै आर्थिक संकट आईपर्दा पनि नोक्सानी बेहोर्नु पर्दैन । स्थान छनौटमा बिषेश ध्यान दिनुहोस् ।
घरको मूल्यमा नजिकैको क्याचमेन्ट एरियाको स्कुलको स्तर तथा त्यहाको समुदायको ठूलो भूमिका हुने गर्दछ । त्यसको बारेमा पहिल्यै जानकारी राख्नुहोस् ।
आवासीय घर किन्दै हुनुहुन्छ भने दुई तिर बाटो भएको घरलाई त्यती राम्रो मानिदैन । यस्ता घरहरुमा प्राईभेसी त्यती मेन्टेन हुँदैन । त्यस्ता घरहरुमा लगानी नगर्नुहोस् ।
सकेसम्म Speed Limit ५०/६० भएको ठाँउमा वा Main Road मा आवासीय घरहरु खरिद नगर्नुहोस् ।
Swimming Pool भएका घरहरुको मर्मत सम्भार खर्च बढी आउने गर्दछ । त्यस्ता घरहरु किन्नुपूर्व यी कुराहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् । आफ्नो आर्थिक अबस्था र आवश्यकता पहिचान गर्नुहोस् ।
अन्तमा, जगेडा स्रोतको जोरजाम तथा पूर्वतयारी
घर किनी सकेपछि पनि केही पैसा आफुसँग जगेडा हुने गरी योजना बनाउनुहोस् । भविष्यमा एक्कासी आईपर्ने आर्थिक खाँचोका बारेमा सचेत हुनुहोस् ।